ပါဝါ:30kw သို့မဟုတ် 37kw သုံးအဆင့်
စွမ်းရည်:900~ 1200kg / h
Straw လုံးလေးများ အပူပေးမှုအတွက်ဇီဝလောင်စာပစ္စည်းများမှလုံးလေးများပြုလုပ်သောအတောင့်ပုံနှိပ်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်. ကုန်ကြမ်းသည်ဂျုံကောက်ရိုးဖြစ်နိုင်သည်, ဆန်ကောက်ရိုး, နှင့်အခြားအလားတူစိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း.Strawသည်ဆန်ကဲ့သို့သောစပါးရိတ်သိမ်းခြင်းမှကျန်ရှိနေသေးသောအကြွင်းအကျန်များကိုရည်ညွှန်းသည်။, အခြားသူများအကြားပြောင်းဖူးနှင့်ဂျုံ. ခန့်မှန်းခြေရှိရာဥရောပ၌ဤအရေးကြီးသောစိုက်ပျိုးရေးအကြွင်းအကျန်များသည်အတော်လေးရေပန်းစားသည် 23 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကောက်ရိုးသန်းပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သည် 15 ပြည်နယ်များ. Straw pellets များသည်ကောက်ရိုးမှထုတ်လုပ်သောအထူးထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီးအပူထုတ်လုပ်မှုမှတိရိစ္ဆာန်အစာများနှင့်တိရစ္ဆာန်အခင်းများအထိအသုံးချမှုများရှိသည်. ကုန်ကြမ်းကောက်ရိုးကနေလုံးလေးများနိုင်ရန်အတွက်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနံပါတ်ဖျော်ဖြေရမည်ဖြစ်သည်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူရင်းအကြွင်းအကျန်ဟာဆဲလ်တွေပါဝင်တဲ့မတူညီတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့ဖြစ်တယ် (80-90%) နှင့် lumen (10-20%). အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုတွင်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော silica နှင့် extractives အားလုံးပါဝင်သည်. ကောက်ရိုးလုံးလေးများမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြချက်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်.
Straw / Grass Pellets ပြုလုပ်နည်း?
ကောက်ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကောက်ရိုးများကိုဖုန်မှုန့်များနှင့်အခြားဂြိုလ်သားများနှင့်ကျောက်ခဲများနှင့်ရောနှောထားသည်, သတ္တုနှင့်ပလတ်စတစ်. ဤရွေ့ကားနိုင်ငံခြားအစိတ်အပိုင်းများကို pelleting စက်များပျက်စီးစေခြင်းနှင့်လည်းလုံးလေး၏အရည်အသွေးကိုလျှော့ချဖို့အလားအလာရှိသည်. သူတို့ထို့ကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်.
Straw ဇီဝလောင်စာသည်အခြေခံအားဖြင့်ပြွန်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောအရွယ်အစားကိုကြေမွရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းမှာဖော်ပြပါအသုံးချမှုများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။. ကြိတ်ခွဲခြင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ကောက်ရိုးစက်များတွင်အသုံးပြုသောသင့်တော်သောအတိုင်းအတာကိုကောက်ရိုးဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်.
ကောက်ရိုး / မြက်လုံးလေးများပြုလုပ်သောဤဖြစ်စဉ်ကိုမကြာခဏရှောင်ကွင်းပြီးဖြစ်သော်လည်းကောက်ရိုးလုံးလေးများဖွဲ့စည်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်. Straw အကြောင်းကိုပါဝင်သည်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ 15% လုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအစိုဓာတ်ပါဝင်မှု. မြင်သောအခါဖုန်မှုန့်ကိုလည်းအသုံးပြုသည်, ထို့နောက်ခြောက်သွေ့ဖြစ်စဉ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်.
ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်လိုချင်သောပြည်နယ်သို့ကောက်ရိုးခိုင်မာမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်. ၎င်းတွင်ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ရေအသုံးပြုခြင်း၊. မှန်သောအပူချိန်ရရှိရန်အတွက် lignin ကိုလွယ်ကူစွာပျော့ပျောင်းစေပြီးအေးစက်စေရန်လိုအပ်သည် (သောကုန်ကြမ်းကောက်ရိုးတွင်တွေ့ရပါသည်) အဆိုပါ binding အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်. တောင့်တင်းခိုင်မာလာမှုသည်တောင့်တင်းသည့်အခါအလွန်အမင်းပွန်းစားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်.
ကောက်ရိုး / မြက်လုံးလေးများသည်ကောက်ရိုးလုံးများကိုထုတ်လုပ်သည့်အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည်. ဒီကာလအတွင်းထေူ၏, ကောက်ရိုး၌အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ,ဖိုင်ဘာကြံ့ခိုင်မှု, အမှုန်အရွယ်အစားနှင့်သဘာဝအခညျြနှောငျ. ဤသူအပေါင်းတို့သည်တောင့်အရည်အသွေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုး. တောင့်တောင့်ကိုဖျက်စီးရန်လည်းအရေးကြီးသည်, overheating နှင့် pellet die ပိတ်ဆို့ခြင်း. ဤရွေ့ကားစိန်ခေါ်မှုများတိုးလာစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်, မြက်တောင့်ကြိတ်စက်နှင့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းအရည်အသွေးထိခိုက်စေ. ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်သောကောက်ရိုးများကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ချုံ့ထားသောအချပ်များကို အသုံးပြု၍ ဖိအားအရှည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုရရှိစေသည်.
pelletizing ပြီးနောက်, ကောက်ရိုးသည်အများအားဖြင့်ပူ။ နူးညံ့လိမ့်မည်. ထို့နောက်၎င်းတို့သည်အမှုန့်များကိုသန့်စင်ပြီးနှစ်လိုဖွယ်မာကျောမှုကိုရရှိရန်အအေးခံသင့်သည်. နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်အစိုဓာတ်သိပ်သည်းမှုကိုပြသနေသော်လည်းအစိုဓာတ်ကိုလျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်. အစိုဓာတ်ကိုမကြာခဏကနေလျှော့ချဖြစ်ပါတယ် 15-20% အောက်ကရန် 10% သိပ်သည်းဆကနေမြင့်တက်နေစဉ် 130 အကြောင်း 600 ကီလိုဂရမ် / m³.
အဘယ်အရာကိုကုန်ကြမ်းကောက်ရိုး / မြက်လုံးလေးများသို့လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်?
ကုန်ကြမ်းများကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာရှိပါသည်, သစ်သားကဲ့သို့သော, သစ်ပင်များ, ကောက်ရိုး, ဖွဲ, ၀ ါးရိတ်ခြင်း, မြေပဲခွံ, မင်္ဂလာပါ, Alfafa ဟာနှင့်အခြားကုန်ကြမ်း, စသည်တို့. သစ်တောနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအပိုင်းအစအားလုံးကိုသေးငယ်သောအစာ (သို့) လောင်စာတောင့်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်. သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအစိုဓာတ်နှင့်အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားသောတောင်းဆိုမှုကိုရှိသည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, ကုန်ကြမ်း၏အစိုဓာတ်ကိုအနီးကပ်သည် 15%. ဒီအခြေအနေအောက်မှာ, ထုတ်လုပ်လုံးလေးများသည်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးရှိလိမ့်မည်. သို့သော် lignin သို့မဟုတ်သကြားပါဝင်မှုမြင့်မားသောပစ္စည်းများသည်အစိုဓာတ်လိုအပ်သည်. ကုန်ကြမ်း၏အရွယ်အစားသည်, ဒါကြောင့်သေတွင်း၏အချင်းထက်မပိုဖြစ်သင့်သည်. ဥပမာ, သေအပေါက်၏အချင်း 6mm လျှင်, ကုန်ကြမ်းအရွယ်အစားသည် ၈ မီလီမီတာနီးပါးရှိသည်, အဆိုပါလုံးလေးများကြိတ်အတွင်း၌စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပင်ပျက်စီးမှုရှိရလိမ့်မည်. သင်ကုန်ကြမ်းများစဉ်းစားနိုင်သမျှ, ကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝလောင်စာတောင့်သည်စက်ကသင့်ကိုအတောင့်တင်းစေခြင်း၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်သည်.
Straw / Grass Pellets ၏ကောင်းကျိုးများ
1. အစာကျွေးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရာသီအလိုက်အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးသည်. ဆောင်းတွင်း၌အာဟာရနည်းမှုနှင့်အတူကျက် စား၍ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားသည် . သို့တိုင်, နွေးထွေးသောရာသီများ၌မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်အစာမစားနိုင်အောင်အာဟာရပြည့်ဝစွာစိုက်ပျိုးသည်. ဒီတော့, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြည့်စုံစေရန်ပူနွေးသောရာသီတွင်မြက်ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုရန်, မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်းတွင်းတွင်မြက်တောင့်များကိုသိုလှောင်။ မြက်ရိတ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်, ခြောက်သွေ့, ကြိတ်ခွဲ.
2. မြင့်မားသောအသွင်ပြောင်းမှုနှုန်း. တိရစ္ဆာန်များနှင့်ကြက်ဘဲများကိုဆောင်းတွင်းအစာတောင့်ဖြင့်အစာကျွေးသည်, ငါတို့ကအသားပိုရနိုင်တယ်, လျော့နည်း forage နှင့်အတူကြက်ဥနှင့်နို့.
3. သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်. မြက်တောင့်ကိုသာပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ် 1/4 သိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်သင့်အတွက်အသံအတိုးအကျယ်အတွက်ကုန်ကြမ်းများ. ဖြည့်စွက်ကာ, ဖုန်မှုန့်နည်းပါးသောကြောင့်လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကျိုးရှိသည်.
4. အာဟာရပြည့်ဝစေရန်နှင့် forage အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်.
ဥပမာအားဖြင့်, ချိုမြိန် Clover coumarin တစ်အရသာပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းမွေးမြူရေးကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး. သို့သော်, ၎င်းသည်ခိုင်မြဲသောအာဟာရဓာတ်နှင့်မြင့်မားသောအာဟာရတန်ဖိုးရှိသည့်အခြား forage တစ်ခုဖြစ်လာသည်.
ထိုကဲ့သို့သော caragana အဖြစ်, အကောင်းဆုံး quinoa, hedysarummaxim. အကိုင်းအခက်များရှိသည့်စသည်တို့သည်ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်မြက်တောင့်များထဲသို့တစ်ချိန်ကပြုပြင်ထားသောအဆင်သင့်ရှိသောသစ်စာများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်. ထို့အပြင်, ထိုကဲ့သို့သောမအောင်မြင်သော shell ကိုကဲ့သို့သောအခြားကောက်ပဲသီးနှံ၏အလယ်တန်းထုတ်ကုန်, ကောက်ရိုးသာမကအရွက်အမျိုးမျိုးကိုလည်းမြက်တောင့်များအဖြစ်ပြုပြင်ပြီးမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အစာကိုကျွေးမွေးနိုင်သည်.